डा. बाबुराम भट्टराई | Nagarik News - Nepal Republic Media
तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न हाम्राे पार्टी प्रतिवद्ध छः भट्टराई
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत होः बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्टको संकेत भएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्।
समाजवाद शब्दप्रति आकर्षण बढ्नु स्वागतयोग्य: डा.बाबुराम भट्टराई
समाजवाद शब्दप्रति आकर्षण बढ्न थाल्नु स्वागतयोग्य छ, उनले भने, नयॉ दर्ता भएका दलहरूको नाउॅबाट त्यस्तै संकेत मिल्छ।
नागरिक संवाददाता ६ भाद्र २०७८ आइतबार १ मिनेट पाठ
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जानुपरेकोमा आफू लज्जित र दुखित रहेको बताएका छन्।
सन्देश श्रेष्ठ २९ पुस २०७७ बुधबार ३ मिनेट पाठ
डा. बाबुराम भट्टराईलाई कमल थापाको जवाफ : आगो लागेको घरबाट निस्कनोस्
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो कोठामा सुत्ने झगडाका कारण जिन्दगीभरको मेहनतले बनाइएको ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को घरमै आगो लगाइएको भन्दै निभाउन सबै दललाई आग्रह गरेका थिए।
भट्टराईको टिप्पणीः ठूलो कोठामा सुत्ने झगडाले घरमै आगो लगाइदिए
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाभित्रको आपसी मतभेद र झगडाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आगो लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध देशैभर प्रदर्शन गर्ने जसपाको निर्णय
त्यसअघि थप रणनीति तय गर्न जसपाले भोलि मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्ने भएको छ।
नागरिक संवाददाता ६ पुस २०७७ सोमबार १ मिनेट पाठ